Qareenka Antalya Xafiiska Sharciga Mehmet Dursun, Xafiiska Dhexdhexaadinta
Hadafkayagu waa in la difaaco xuquuqda dhammaan noocyada kala duwan ee dadka ku nool oo dhan nidaamka sharciga ah, xuquuqda milkiilaha ugu dhaqsaha badan oo ku siin habka ugu sharci, xuquuqda in ay qaado taxadarka loo baahdo hore in la lumay iyo Hanuun u ah dhinacyada sidoo kale waxay bixiyaan la-talin lagama maarmaanka ah.
2018 copyright Qareen Mehmet Dursun
Saacadaha Shaqada Isniin-Jim
Waxaad nagala tashan kartaa mawduuc walba.
Antalya Lawyer, fulinta sharciga iyo fulinta. Qareen
Turki Dacwada Dembiyada - Qareenka Cadaaladda iyo Cadaaladda Canshuuraha
Tarbiyadii IT-ga ee Antalya - U doodista Dambiyada Internetka
Xeerka Kiisaska Caddeynta ee Antalya, Kiisaska Sharciga Magdhawga
Afhayeenka Xad-gudubka, U-doodaha Caafimaadka, U doodaha Sharciga Caafimaadka
Afhayeenka Macaamiisha Antalya, U doodaha Xuquuqda Macmiilaha
Afhayeenka Shaqaalaha ee Antalya, Qareenka Shaqaalaha, Qareenka Ganacsi Lacageed
Qareenka Dhaqanka ee Antalya, Redd-i Heritage, Qareenka Dhexdhexaadinta Dhaxalka
Xeer Ilaaliyaha Sharciga ee Antalya
Afhayeenka Caymiska ee Antalya, U-doodaha Shilalka Gaadiidka
QOYSKA IYO QAADASHADA
Antalya Furiinka Furiinka, Masruufka, Udoodista Qaadista
Codsiga Shakhsi ahaaneed ECHR
Xeerka Hantida Aqoonta
Qareenka Patent of Antalya, Fiktoorinta iyo Farshaxanka Farshaxanka, U-doodaha Ganacsiga,
Isbahaysiga Iskaashatada, Isuduwaha Wadatashiga ee Antalya
Qareenka Real Estate Advocate, Hantidhawrka Gawaarida, Qareenka Dhulka
Qareenka Canshuuraha, Qareenka Canshuuraha
qareenada our Waxaad la xiriiri kartaa si aad ula tashato.
maadooyinka Qareenada khabiirkayagu had iyo jeer way idinla jiraan.
Antalya Lawyer adag, fulinta sharciga, sharciga ganacsiga, sharciga tiknoolajiyadda macluumaadka, sharciga qoyska, sharciga hantida maguurtada ah iyo payables u badan yihiin sharci ee dhammaan laamaha sharciga iyo sidoo kale aqoonsado go'aanka maxkamadda caalamiga ah sidoo kale waxay bixisaa adeegyada turjumaada sharciga ah ee fulinta iyo sale of maado hantida maguurtada ah ajnabiga. Our xafiiska dhawaan helay aqoonsado loona saxiixo weyn ee adduunka ugu lacagta dalwaddii, lacagta dalwaddii iyo is dhaafsi lacagta dalwaddii macdanta, wax lagag qaban cabashada ah arimahan oo kale oo ay bixisaa adeegyada la talinta la xidhiidha maalgashiga.
Turkey iyo Antalya sidoo kale Dursun Mehmet dunida oo dhan sida Advocacy hamigeena Office, adduunka oo dhan ay qaadaan tallaabooyinka si looga fogaado luminta xuquuqda macaamiisha our, haddii xuquuqdooda lagu khasaariyey waa in la soo celin ilaa xad gacmaha sharciga.
Dhex-dhexaadiye - Xeer-ilaaliyaha - Qareenka Trademark
Qareen Cadriye ERSOY
Antalya Qareen Qadriye Ersoy
Qareenka Zeki Dursun
Eeg Tusaaleyaal buuxa Zeki
M.Cushavir Bilal Clothed
La-taliyaha Maaliyadeed Bilal Kilim
Ogaada. iyo La-taliyaha Guud
Samet EFE - Takhasuska Macluumaadka
Waxa uu leeyahay mitir. Davut Dursun
La taliyaha GM & Maalgashiga
Eeg Albina's Profile Dhammaan
Meelaha Awood-Weynaha Hel natiijooyinka guuleysta.
Qof walbaa kuma guuleysan karo dhammaan meheradaha, laakiin haddii aad haysato wax ka badan hal takhasus oo ku takhasusay beerahooda oo aad uga tagto shaqaale takhasus leh, guusha ayaa adiga kula jirta.
Kiisaska iyo Takhasusyo
MAXKAMADDA DASTUURKA B.BASAS
MAXAA DHACAYAA LAWYER
Eeg dhammaan farsamada hoos yimaada
Sharci gaar ah
Dambiyada Dambiyada Dambiyada
QOYSKA IYO SHARCIYADA ISKUULKA
SHAQADA IYO SHAQAALAHA LACAGTA
WAXYAABAHA IYO DHALINYARADA
Sharciga khaaska ah
CAYMISKA HESHIISKA LAWYER
TALOOYINKA MAXAY TAHAY LAWYER
WAXYAALAHA LAGU DHALAN YAHAY
SHARCIYADA GOBOLKA DAWLADDA
MACLUUMAAD DHEERAAD AH IYO DALKA
Waxaan halkaan u joognaa ...
HORUMARINTA XAFIISKA GOBOLKA
Waxaan ku jirnaa adeeggaaga qareenkeena gaarka ah ee ku takhasusay sharciga hantida maguurtada iyo miyiga.
Waxaan dooneynaa inaan xallinno dhammaan dhibaatooyinkaaga qareenkeena kaas oo qabtay shaqo tacliineed oo ku saabsan hanti maguurto ah iyo gaar ahaan 2B oo leh khilaafaad badan oo ka jira waddankeena.
Macluumaadka ku saabsan 2B
Waxaan ilaalineynaa dhammaan xuquuqdaada sharci ahaan iyo dembiile ahaan, marka la eego Bitcoin, Blockchain iyo lacag dhan sanadeed, labadaba xisaabtan iyo sharci ahaanba.
Waxaan la aasaasay ururka ugu horeeyay ee aan dawliga ahayn, Association of Lacagta Virtual si xaqaada aad u la qareenada khabiir iyo la taliyayaasha dalka Turkiga.
Qareen Mudane / Waxaan ilaalineynaa xuquuqda ajaanibta waddankeena iyo xuquuqda muwaadiniinteena ku sugan sharciga caalamiga ah.
Turkey maxkamadda horteeda indhaha iyo hayadaha shisheeye, halka aan difaaco xuquuqda muwaadiniinta iyo quruumaha our in amar ka soo Maxkamadda Ilaaheenna.
Waayo-aragnimo sanadeedka 20 adiga oo ku matalaya dhammaan gobolada
Our xafiiska, fulinta sharciga, sharciga ganacsiga, sharciga tiknoolajiyadda macluumaadka, sharciga qoyska, sharciga hantida maguurtada ah iyo payables u badan yihiin sharci ee dhammaan laamaha sharciga iyo sidoo kale aqoonsado go'aanka maxkamadda caalamiga ah sidoo kale waxay bixisaa adeegyada turjumaada sharciga ah ee fulinta iyo sale of maado hantida maguurtada ah ajnabiga. Our xafiiska dhawaan helay aqoonsado loona saxiixo weyn ee adduunka ugu lacagta dalwaddii, lacagta dalwaddii iyo is dhaafsi lacagta dalwaddii macdanta, wax lagag qaban cabashada ah arimahan oo kale oo ay bixisaa adeegyada la talinta la xidhiidha maalgashiga. Turkey iyo Antalya sidoo kale Dursun Mehmet dunida oo dhan sida Advocacy hamigeena Office, adduunka oo dhan ay qaadaan tallaabooyinka si looga fogaado luminta xuquuqda macaamiisha our, haddii xuquuqdooda lagu khasaariyey waa in la soo celin ilaa xad gacmaha sharciga.
Adeegyada Qareen-bixinta iyo sida aan u shaqeyno
qareennada iyo kooxda our dhammaan meelaha khibrad had iyo jeer waxaa laga heli karaa dhammaan shaqada lagama maarmaanka ah samayn, waayo, waxaad UnUzdAdIrlAr.
Qareenadayadu waxay matalayaan adiga oo ah wakiilada xuquuqdaada ee dhammaan maxkamadaha iyo hay'adaha.
Dhammaan adeegga la-talinta waxaa looga baahan yahay inay ilaaliyaan xuquuqda shirkadahaada aduunka oo idil gaar ahaan waddankeena waxaa bixiya qareenadeena.
talo oo dhan loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqda gaarka ah, xuquuqda shakhsi, xuquuqda hantida, iwm by lahayn Agtanada, qareennada iyo shaqaalaha dhammaan arrimaha la xiriira bixiyo aduunka oo dhan gaar ahaan dalka Turkiga.
Adeegyada Guud ee Shakhsiga iyo Shirkadaha
Qareenadayadu waxay qaadaan taxaddir kasta oo lagama maarmaanka ah si loo ilaaliyo xuquuqdaada sharciga ah iyo inaad ku guul darreysid xuquuqda aad u leedahay dalabyada codsiga, wakiilnimada, ilaalinta, ganacsiga, maalgelinta ee dhammaan degmooyinka iyo kuwa caalamiga ah.
qareenada our sharaxaad wargelin ah
Ka shaqee arimahan cusub ee ka yimaada qareenadayada
Macluumaadka hadda iyo guud ee sharciga waa laga heli karaa maqaaladayada.
Waxaad arki kartaa wajiaheena arrimahan sida ku xusan sharciyada isbedelka iyo sharciga kiiska. Iyadoo la siinayo macaamiisheena adeegga ugu wax ku oolka ah ee khilaafaadka sharciga ah, waxaanu raacnaa horumarinta sharciga iyo xeerarka sharciga cusub oo lagu dabaqi karo sharciga sharciga ah.
Konu Feel waa lacag la'aan inaad nala tashato dhammaan arrimaha ku yaalla sharciga sharciga. "
Iibsiga Real Estate-Turkiga
WAA MAXAY ISKUULKA IYO DHISMAHA? Sidee loo codsadaa?
-dhexdhexaadinta, dhabta ah
DIB U HESHIIYAY SHIRKADDA DIBADDA | HORUMARKA MAALINTA
Dhexdhexaadiyaha Dhexdhexaadiye Mehmet Dursun
Wareysiga Nidaamka Dhexdhexaadinta Cusub
Wareysiga Nidaamka Dhexdhexaadinta Ganacsiga
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.